Jawaari oo mar kale loo doortay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya - BBC News Somali
Image caption Jawaari ayaa mar kale loo doortay guddoonka baarlamaanka Soomalaiya
Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa mar kale loogu doortay xilkaasi doorasho ka dhacday magaalada Muqdisho, sida uu ku dhawaaqay guddoonka ku meel gaarka ah ee baarlamaanka Cusmaan Boqore.
Musharraxa ku soo xigay ayaa noqday Cabdirishiid Xidig oo helay 97 cod. Guddoomiyaha dib loo doortay Jawaari ayaa sheegay inuu ku faraxsanyahay doorashada.
Musharrixiinta laga guuleystay ayaa qirtay guul-darrada.
Ammaanka magaalada Muqdisho ayaa maanta aad loo adkeeyay, waxaana la filayaa in beri ay dhacdo doorashada guddoomiye ku xigeenka koowaad iyo labaad ee baarlamaanka.
Image caption Amaanka ayaa aad loo adkeeyay
Musharaxiinta ayaa maalmihii la soo dhaafay waday olole xoogan ay ku doonayaan sidii ay ugu guuleeysan lahaayeen Kursigan.
Image caption Waxaa doorashada kula tartmayay Jawaari Cabdirashiid Xidig,Cabdifitaah Geesey iyo Idriis
Baarlamaanka ayaa lagu wadaa inay soo doortaan madaxweyne isbuucyada soo socdo.
Falanqeyn: Maxaa laga filanayaa doorashada afhayeenka baarlamaanka